Fampidirana fohy an'i Erythrocin - BALLYA
Posted on Janoary 6, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona ny erythrocin?
Inona no ampiasaina erythrocin?
Ahoana ny fampiasana erythrocin?
Fampiasana sy fatrany erythromycine
Inona avy ireo vokatry ny erythrocin?
Vokatry ny erythromycin
Erythrocin, dia ampiasaina amin'ny toeram-pitsaboana indrindra amin'ny tonsillitis, tazo mena, difteria ary mpitatitra, gonorrhea, listeriosis, streptococcus pneumoniae aretina azo avy amin'ny lalan-pisefoana ateraky ny streptococcus (voalaza etsy ambony ireo marary tsy mahazaka penisilinina.) Mbola azo ampiasaina amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana ambony ateraky ny gripa gripa, hoditra Staphylococcus aureus ary aretin-koditra malemy, syphilis, amebiasis tsinay, sns.
Raha misotro ronono any an-trano ianao, BALLYA dia afaka manao andrana erythromycine ihany koa mba hampahafantaro anao raha misy reside erythromycine amin'ny ronono sotroinao ao anatin'ny 10 minitra.
Ity vokatra ity dia karazana iray macrolide antibiotika, vita amin'ny volon'ny kolontsaina ao amin'ny actinomycete Streptomyces erythreus mitokana amin'ny tany ao amin'ny nosy Panay. Navoakan'i EliLilly voalohany tamin'ny 1952. Analog maro hafa toa ny erythromycine Ny B sy C dia novokarina tao anatin'ny vahaolana ara-kolontsaina niaraka tamin'izany, ary ny tsy fitoviana amin'ny solubility solvent dia ampiasaina hanalana azy ireo.
Ity vokatra ity dia vovoka kristaly fotsy fotsy na mavo mavo, tsy misy fofona, mangidy, hygroscopic eny amin'ny rivotra, mety levona amin'ny etanol, chloroform, acétone ary etera ary somary mety levona amin'ny rano. Mitombo ny solubility aorian'ny fananganana sira. Somary marin-toerana ihany izy amin'ny toerana maina, ary ny vahaolana aqueous dia miorina tsara eo ambanin'ny vata fampangatsiahana, ary mihena tsikelikely ny hafanana amin'ny hafanan'ny efitrano. Tsy milamina izy io rehefa tratry ny asidra, ary miorina tsara rehefa misy alkaly kely, ary mihena be eo ambanin'ny PH 4 ny heriny.
3. Vokatry ny fanafody
Erythrocin dia karazana antibiotika fototra novokarin'i Streptomyces erythreus, an'ny an'ny macrolide vondrona. Erythromycine dia mpiasan'ny bakteria, fa misy fiantraikany amin'ny bakteria koa amin'ny bakteria mora tohina amin'ny fifantohana betsaka.
Erythromycine fanatanterahana asa dia ny hoe afaka mamakivaky ny membrane sela bakteria izy io, mba hamatotra azy tsara amin'ny faritra 50S an'ny ribosome bakteria eo akaikin'ny toerana misy ny mpamatsy (toerana "P"), manakana ny asidra ribonucleic transfer (tRNA) tsy hamatotra ny toerana "P", ary koa manakana ny famindrana ny rojo polypeptide manomboka amin'ny toeran'ny mpandray ("A" toerana) mankany amin'ny toerana "P". Ity dingana ity dia manakana ny tsy fitambaran'ny proteinina bakteria ary vokatr'izany dia misy fiantraikany amin'ny bakteria. Erythromycine Tsy mandaitra afa-tsy amin'ny bakteria mizarazara mavitrika.
Erythromycine manana fiparitahan'ny bakteria midadasika ary mandaitra amin'ny bakteria miabo tsara, bakteria miiba ratsy ary bakteria pathogenika atypika. Erythrocin dia manana hetsika fanoherana mahery vaika manohitra ny Staphylococcus (ao anatin'izany ny karazana enti-mamokatra anzima), ny vondrona isan'ny streptococci, ny pneumococcus, ny Bacillus antracis, ny Fusobacterium tetani, Diphtheria, Neisseria gonorrhoeae, Meningococcus, Influenza bacillus, Pertussis, Campylobacter jejuni Geninia, Genetia, Genetia, Genetonia, Genetomy, Genetonia, Genetonia, Genetomy, Genetomy, Genetonia, Genetonia, Genetonia, Genetonia, Genetonia, Genetonia, Genetia, Genetonia, Genetia, Genetonia, Genetia . Izy io koa dia misy fiatraikany tsara manakana ny Treponema pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Leptospira, Rickettsia, Chlamydia, sns.
taorian'ny erythromycine lactobionate dia voadoka, hydrolyzed mba hamotsorana ny erythromycine ilaina. Erythromycine afaka miditra ao amin'ny fonon'ny sela bakteria ary mifamatotra amin'ny ribosome bakteria.
Oral erythrocin dia 200-250 mg, ary ny haavon'ny plasma dia mahatratra ny tampony aorian'ny 2 ka hatramin'ny 3 ora, izay matetika latsaky ny 1 μg / ml. Afa-tsy ny tsiranoka cerebrospinal sy ny tavy ao amin'ny ati-doha, ny fanafody dia miparitaka be amin'ny vatan'ny sela sy tsiranoka isan-karazany aorian'ny fisotroana, indrindra ny fifantohana amin'ny aty, ny bile ary ny spleen dia avo kokoa (ny fifantohana amin'ny bile dia mety hahatratra 10-40 heny ny fifangaroan'ny ra). Ny fifantohan'ny zava-mahadomelina amin'ny voa, havokavoka ary sela hafa dia mety ho avo maromaro imbetsaka noho ny ra; misy koa ny fifantohana avo kokoa amin'ny tavy subcutaneus, ny sputum ary ny tsiranoka bronchial (ny fifantohana ao anaty sputum dia mitovy amin'ny fifantohana amin'ny ra); ao amin'ny tratra sy ao amin'ny kibo, ny fifantohana amin'ny pus dia mety hahatratra ny fifantohana mahasakana.
Erythromycine dia afaka miditra ao amin'ny prostate sy ny seminal vesicle amin'ny habetsany (manodidina ny 33% ny fatran'ny rà), saingy tsy tafiditra mora amin'ny sakana amin'ny tsiranoka-cerebrospinal io. Rehefa mirehitra ny meninges dia 10% fotsiny amin'ny tsiranoka ao anaty ny tsiranoka cerebrospinal. Erythromycine afaka miditra amin'ny fivezivezen'ny ra ny foetus sy ny rononon-dreny. Ny fatran'ny ra ao am-bohoka dia 5% ka hatramin'ny 20% amin'ny fifangaroan'ny rà amneny, ary ny tsiranoka amin'ny rononon-dreny dia mety hahatratra 50% mahery. Taorian'ny fitantanana am-bava ny sira eran'ny erythromycine dia manodidina ny 30% ka hatramin'ny 65% ​​ny bioavailavana. Ny habetsaky ny fizarana dia 0.9L / kg.
Ny tahan'ny fatorana proteinina dia 70% ka hatramin'ny 90%. Ny antsasaky ny fiainana dia manodidina ny 1.4-2.0h, ary ny antsasaky ny marary anuria dia azo hitarina amin'ny 4.8-6.0h. Ny erythromycine maimaimpoana dia voahodina ao amin'ny atiny, mifantoka amin'ny atiny ary mivoaka amin'ny bile. Manodidina ny 2% ka hatramin'ny 5% ny fatra am-bava ary 10% ka hatramin'ny 15% ny habetsahan'ny tsindrona dia voasivana avy amin'ny glomerulus ary mivoaka ao amin'ny urine. Ny fifantohana amin'ny urine dia mety hahatratra 10-100μg / ml. Ho fanampin'izany, ny seza dia misy fanafody maromaro ihany koa. Ny dialy peritoneal sy ny hemodialysis dia tsy afaka manala amin'ny fomba mahomby erythrocin.
Ny lactobionate erythromycine dia tsy voavahan-drano, izay mahatratra ny haavon'ny ra aorian'ny fampidirana intravena. Raha ampidirinao ao anaty 2h ny atiny mandritra ny 24 ora, ny tahan'ny rà eo ho eo dia 2.3-6.8 mg / L.
1. Erythrocin Mampiasa
Ity vokatra ity dia karazana iray antibiotika macrolide. Ny karazany ny bakteria dia mitovy amin'ny penisilinina. Izy io dia mahatohitra bakteria Gram-positive, toy ny Staphylococcus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus faecalis, Streptococcus hemolyticus, Clostridium Bacillus, Diphtheria, Bacillus anthracis, sns. , toy ny Neisseria gonorrhoeae, Helicobacter, Pertussis, Brucella, Legionella, Meningococcus, Haemophilus influenzae, Bacteroides, ampahan'ny Shigella sy Escherichia coli.
Ho fanampin'izany, misy vokany manakana ny mycoplasma, actinomycetes, spirochetes, rickettsiae, chlamydia, nocardia, mycobacteria vitsivitsy ary amoeba. Staphylococcus aureus ary bakteria Staphylococcus ary Streptococcus hafa. Izy io dia mampiavaka azy amin'ny fihenjanana izay mahazaka penisilinina ary mora tohina amin'ny vokatra. ny fanatanterahana asa dia noho izy io mitambatra indrindra amin'ny vondrona 50S an'ny vatan'ny ribonucleoprotein, manakana ny acyltransferase peptide, misy fiatraikany amin'ny fizotry ny famindrana ny vatan'ny ribonucleoprotein, ary ny fanakantsakanana ny fitomboan'ny rojo peptide sy ny sintetika proteinina bakteria.
Tonsillitis maranitra, pharyngitis maranitra, sinusitis ateraky ny hemolytic streptococcus, streptococcus pneumoniae, sns.
Ny tazo mena sy ny cellulitis vokatry ny hemolytic streptococcus.
Mycoplasma pnemonia pnemonia, Chlamydia pnemoniae pnemonia.
Gangrene gazy, anthrax, tetanosy.
Diphtheria (fitsaboana adjuvant) sy mpitatitra difteria.
Aretina urogenital vokatry ny Chlamydia sy Mycoplasma.
Legionella pnemonia (legionellosis).
Neisseria gonorrhoeae aretina.
Campylobacter jejuni enteritis.
Aretina am-bava ateraky ny bakteria anaerobika.
Ny dermatology dia ampiasaina indrindra amin'ny urethritis tsy gonococcal (cervicitis), gonorrhea, syphilis, chancroid, lymphogranuloma chlamydial (lymphogranuloma venereous), mony ary ny aretin-koditry Staphylococcal, tazo mena, sns.
Erythrocin afaka mamakivaky ny sakana placental ary miditra amin'ny rononon-dreny. Vehivavy bevohoka sy mampinono ary ireo izay tsy mahazaka aretina macrolides tokony hampiasa azy io am-pitandremana.
2. Fampiasana sy fatrany erythromycine
Dosis am-bava mahazatra: 1 ka hatramin'ny 2g isan'andro, mizara telo hatramin'ny 3 heny. Aretin'ny legionnaires: ny fatra isan'andro dia azo ampitomboina 4 ka hatramin'ny 2 g, mizara 4 fatra. Fitantanana eo an-toerana: Mba hitsaboana trachoma, conjunctivitis, ary keratitis, asio menaka manitra sahaza ny hodi-maso imbetsaka isan'andro. Dosis ho an'ny tsy fahampian'ny voa: ny marary manana fihenan'ny renal amin'ny ankapobeny dia tsy mila mampihena ny fatra.
Ankizy: Fitantanana am-bava: 30-50 mg / kg isan'andro, in-3 hatramin'ny in-4. Fitantanana eo an-toerana: ho an'ny trachoma, conjunctivitis, keratitis, asio menaka manitra sahaza ny hodi-maso imbetsaka isan'andro.
Mitete intravenous: olon-dehibe: fatra ankapobeny: 1 ～ 2g isan'andro, mizara 2 ～ in-4. Aretin'ny legionnaires: 3 ka hatramin'ny 4g isan'andro, ampiharina amin'ny fatra 4 mizara. Ny fatra avo tsy mety mihoatra ny 4g. Ankizy: 20-40 mg / kg isan'andro, mizara 2 hatramin'ny 4 heny.
ny voka-dratsin'ny erythrocin
1. Vokatry ny erythromycin
Ny soritr'aretin'ny gastrointestinal toy ny fivalanana, ny fisaleboleboana, ny fandoavana, ny aretin-kibo eo afovoany ambony ary ny fahaverezan'ny fahazotoan-komana dia mety hitranga aorian'ny fitsaboana. Ny tranga dia mifandraika amin'ny doka.
Hepatotoxicity toy ny havizanana, jaundice ary fiasan'ny aty tsy ara-dalàna dia mety hitranga indraindray aorian'ny fiterahana.
Ny fatra lehibe (≥4g isan'andro) dia mety miteraka ototoxisialy amin'ny marary voan'ny aty na aretin'ny voa, na amin'ireo marary efa antitra. Izy io dia miseho indrindra amin'ny fahaverezan'ny fihainoana. Mety misy ifandraisany amin'ny fiakaran'ny tosi-drà (> 12 mg / L), ary ny ankamaroan'izy ireo dia afaka miverina amin'ny ara-dalàna aorian'ny fampiatoana ny zava-mahadomelina.
Indraindray, ny fanehoan-kevitra mahazaka toy ny tazo rongony, maimaika ary eosinofilia dia mety hitranga aorian'ny fitsaboana, ary ny tranga dia eo amin'ny 0.5% ka hatramin'ny 1%.
Marary vitsivitsy no manana arrhythmia tsindraindray, ary voan'ny Candida am-bava na amin'ny fivaviana taorian'ny fitsaboana.
Ny marary sasany dia mety hahatsapa fahasosorana amin'ny lalan-drà na phlebitis aorian'ny fitantanana intravena.
Erythromycin dia fanafody bakteria. Ny fitantanan-draharaha dia tokony hatao amin'ny elanelam-potoana iray mba hitazonana ny fifantohan'ny zava-mahadomelina ao amin'ny vatana sy hanamorana ny vokany.
Erythromycine takelaka tokony ho voatelina tsara. Raha nalaina ny vovoka dia ho simban'ny asidra gastric izy io ary hihena ny vokany. Ny ankizy kely dia afaka mandray esterified acid-stable erythrocin.
Mora miteraka phlebitis ny fitetezana intravenous, ka tokony ho miadana ny hafainganam-pandeha.
Ny erythromycine dia manimba sy mampihena ny vokany amin'ny fampidirana asidra, noho izany amin'ny ankapobeny dia tsy tokony hifanaraka amin'ny fampidirana glucose glucose ambany. Ao amin'ny 500ml 5% ～ 10% fampidirana glucose, asio tsindrona vitamina C (1g sodium ascorbate) na 0.5ml tsindrona sodium bicarbonate 5% hampiakatra ny pH ambonin'ny 5, ary hanampy lactobionate erythromycine, dia hanampy amin'ny fitoniana.
3. Fifandraisana rongonys
Erythromycine dia ampiasaina miaraka amin'ireo fanafody antiepileptika toy ny karbamazepine sy asidra valproic, izay afaka manakana ny fatran'ny karbamazepine sy ny asidra valproic, izay mampitombo ny fatran'ny rà azy ary miteraka fanehoan-kevitra misy poizina. Ary ny carbamazepine dia afaka mampihena ny fahombiazan'ny erythromycine amin'ny alàlan'ny oxidase mikrosomaly amin'ny aty.
Ny fitambaran'ny erythromycin sy cyclosporine dia afaka mampiroborobo ny fitrohana cyclosporine ary manelingelina ny metabolisma. Ny fisehoan'ny klinika dia ny fanaintainan'ny kibo, ny fiakaran'ny tosidrà ary ny tsy fetean'ny aty.
Ny fampiasana erythromycine sy xanthines (afa-tsy ny dihydroxyprophylline) dia afaka mampihena ny fahazoana hati ny amôfôlika, izay mitarika fitomboan'ny serum aminofylline serum ary / na mihombo ny poizina. Ity tranga ity dia mety hitranga aorian'ny 6 andro, ary ny fihenan'ny fahazoan-dàlana aminophylline dia mitovy amin'ny serum erythromycine tampon'ny.
Ny vondrona erythromycine ary digoxine afaka manadio ny flora tsinay afaka mampihetsika digoxine, noho izany dia miteraka fivezivezivezy ny tsinay ny digoxine, mampitombo ny fatran'ny digoxine amin'ny ra ary miteraka fihetsika misy poizina.
Erythrocin misy fiantraikany amin'ny bakteria amin'ny bakteria maro ary afaka manolo penisilinina amin'ny tranga sasany. Noho izany, erythromycine dia manana fampiasa sy vokany tsara. Saingy tokony hitandrina ihany koa isika ny vokany sy ny fifandraisan'ny erythromycine amin'ny zava-mahadomelina.
fanafody: Erythrocin 250 Takelaka